Ny seranam-piaramanidina Budapest dia nanambara zotra vaovao niaraka tamin'ny Wizz Air
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny seranam-piaramanidina Budapest dia nanambara zotra vaovao niaraka tamin'ny Wizz Air
Seranam-piaramanidina Budapest nanambara izany Wizz Air dia hanitatra asa avy amin'ny vavahady Hongroà mandritra ny S20, miaraka amin'ny fanampiana Menorca sy Santorini. Manamarika ny fotoana voalohany nanatontosana ireo toerana roa ireo tao amin'ny sarintanin'i Budapest, ireo seranam-piaramanidina ihany koa dia natolotry ny Wizz Air satria ny tokan-trano misy ny zotram-piaramanidina dia anisan'ny fifandraisana vaovao lehibe.
Rehefa manomboka miverina any Eropa ny fifandraisana, dia hampiakatra tsikelikely ny sidina atolotray avy any Budapest mandritra ny vanim-potoana fahavaratra ireo lalana roa ireo. Manangana serivisy indroa isan-kerinandro amin'ireo toeram-pialan-tsasatra mahazatra roa volana ho avy, ny vavahady Hongrie dia handray ny rohy Wizz Air mankany Santorini amin'ny 15 Jolay ary Menorca amin'ny 18 Jolay.
Miaraka amin'ny fanampiana ny fifandraisana vaovao an'i Wizz Air amin'i Menorca, ny mpitatitra be sandany ambany (ULCC) dia hanompo seranam-piaramanidina Espaniola 10 avy any Budapest amin'ny taona 2020, izay mijanona ho mpandraharaha lehibe indrindra amin'ny seranam-piara amin'ny sezany mankany Espana. Tamin'ny taon-dasa dia nanolotra seza 534,000 ny seranam-piaramanidina eo amin'ireo firenena roa manerana ny mpitatitra rehetra, fitomboana 12% eo ho eo isan-taona hatramin'ny 2010.
Satria nanatri-maso fitomboana 3% salantsalany isan-taona tany amin'ny Nosy Greek nandritra ny folo taona lasa i Budapest, ny fanombohana ny rohy ULCC mankany Santorini dia hahita ny seranam-piaramanidina manampy ny fahasivy ifandraisany amin'i Gresy, satria ny nosy dia miditra amin'i Athens, Corfu, Crete ( Chania sy Heraklion), Mykonos, Rhodes, Tesalonika ary Zakynthos.
"Noho ny fiaraha-miasa tsy mampino an'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, mpiara-miombon'antoka ary ekipa rehetra ao amin'ny seranam-piaramanidina Budapest dia afaka nitazona ny vavahady izahay, soa aman-tsara, ho an'ireo mpandeha tao anatin'ny herinandro vitsivitsy," hoy ny fanazavan'i Kam Jandu, CCO, seranam-piaramanidina Budapest. "Miasa eo ambanin'ny torolàlana ho an'ny fiaramanidina eropeana mba hiantohana fa ny fiarovana ny mpandeha sy ny mpiasa dia mijanona ho loha laharana amin'ny fandaharam-potoananay, faly izahay mifantoka amin'ny fanomezana safidy fialantsasatra lehibe ho an'ny fiarahamonina. Ny fanampin'ny Wizz Air farany teo amin'ny sari-taninay dia dingana iray hafa mankany amin'ny olona rehetra mankafy ny fahafinaretana amin'ny dia indray ", hoy ihany i Kam Jandu.